Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq & Prof Cali Khaliif oo maanta booqanaya – Puntlandtimes
Wararkii ugu dambeeyey ee Tukaraq & Prof Cali Khaliif oo maanta booqanaya
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland ayaa sheegaya in ay degan tahay xaaladda jiidahaas, balse cabsi laga qabi karro dagaal toos ah oo dhinacyada ku dhexmara halkaas, waxaana welwelka ugu badan laga qabaa in ay dhinacyadu xili kasta dagaalami karaan.
Xubno kasocda Somaliland, gaar ahaana u dhashay Laascaanood oo uu hogaaminayo Cali Khaliif Galeyr ayaa lafilayaa in ay deeq maanta soo gaarsiiyaan ciidamada Somaliland ee kusugan Tukaraq, waxayna kulamo la yeelan doonaan saraakiisha Somaliland.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in arrimaha taagan ka sokow ay jiraan khilaaf mudo taagan oo u dhaxeeya saraakiisha u dhalatay Sool ee kujira ciidamada Somaliland iyo kuwa laga keenay gobalada kale ee maamulkaas, kaas oo ka dhashay wixii ka dambeeyey markii ay dhinacyadu isku afgaran waayeen qaab dagaaleedka.
Taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani Ismaaciil oo ka hadlayay magaalada Tukaraq doraad ayaa u sheegay Afhayeenka baarlamaanka Soomaliland Baashe Maxamed Faarax in looga baahan yahay siyaasiinta gobalka Sool, in ay taageero la garab istaagaan ciidamada.
Xaaladda Tukaraq ee dhanka dagaalka ayaa soo taagneyd 7dii bilood ee bilowga sannadkan, waxaana welwel weyn laga qabaa dagaal xili kasta dhici kara, iyadoo dhinaca Puntland ay mudo dheer ku jiraan diyaar garow dagaal oo kuwajahan guud ahaan gobalka Sool.
Dhulbahante munaafiq waa kaas.. sad noocas see loo xoreenkaraa,kii munaafiq iyo kii kale lagaranwaayay.. dhulbahante haduu xoreenta dhulkiisa daacad u ahayn,halagu kala rago meeshan.. awalba puntland magaca “dastuurka puntland ” bay dagaalka u gasha ee dhulbahante hunguri cid iskuma wareerinlaheen shidadooda iyo caqli gaabnimadooda..dhulbahante hunguri inii magaca hartinimo lagu difaacno mooyee wax faaida iskuma hayaan usja daa cidkale fasido u hayaan..